Kefir biyo | Cuntada Nutri
Kefir waa cunno aad u caafimaad badan laakiin waqti isku mid ah way adagtahay in la helo si loo fuliyo midkoodna kefir biyo ama caano, labada nooc ee kefir ee jira.
Kefir wuxuu leeyahay sifooyin probiotic ah Aad u xiiso badan jirka, waxay u baahan tahay diyaarin farshaxanimo ah iyo raacitaanka tilmaamaha qaarkood si biyo looga dhigo kefir.
Kefir biyaha, sida caanaha kefir, waxay leeyihiin isla microflora. Xaaladdan oo kale, kefir biyo ayaa ka fudud in la sameeyo maaddaama aadan u baahnayn caano cayriin si loo sameeyo.
1 Kefir biyo
2 Sida loo sameeyo kefir biyo
2.1 Qalabka loo diyaariyo
2.2 Waxyaabaha ay ka kooban tahay ayaa loo baahan yahay
2.3 Diyaargarow, talaabo talaabo ah
3 Guryaha kefir biyaha
Haddii aad si joogto ah u xanuunsato dhibaatooyinka caafimaad ee caloosha, waxaad sameyn kartaa kefir biyo si aad u daryeesho caafimaadkaaga oo aad u ahaato mid xoogan, marka lagu daro, ku diyaarinta kefir biyaha guriga waa mid fudud, waxaad u baahan tahay inaad hesho probiotics si aad ugu raaxeysatid biyahan khamiirka badan.
Si aad u sameyso kefir biyo, waxaad u baahan tahay miraha kefir, si loo sameeyo cabitaanka biyaha ku saleysan. Badarradani waa kuwo ay ka buuxaan probiotics, noolaha noolaha ee bakteeriyada oo tayo sare leh kuna wada nool isla deegaanka. Bakteeriyadaani waxay naga caawin kartaa inaan caafimaad qabno oo difaac adag yeelanno.
Daawooyinkaani, waa bakteeriya wanaagsan oo laga helo nidaamka dheef-shiidkaWaxay muhiim u yihiin dheef-shiidka iyo nafaqooyinka si ay u dhex galaan qulqulka dhiigayaga, marka lagu daro inay naga difaacaan cudurada.
Nidaamka difaaca jirka waa la ilaaliyaa wuxuuna helaa awood dheeri ah, hadii aan dareemo daciifnimo, dheefshiid xumo, lallabbo ama dhibaatooyin markii aan aadeynay adeegga, fiiro gaar ah u yeelo oo aan baranno sameynta Kefir biyoa si aan kuugu ilaaliyo caafimaad iyo jilicsanaan. Intaa waxaa dheer, in la ilaaliyo cunto isku dheellitiran iyo jimicsi joogto ah.
Sida loo sameeyo kefir biyo
Diyaarinta cabitaankan ayaa ah fudud, dhakhso leh waxayna siisaa natiijooyin aad u wanaagsan. Waxay u baahan tahay oo keliya wakhti nasasho iyo halsano ku wareegsan Saacadaha 48.
Qalabka loo diyaariyo
Dhalo galaas ah 1 litir.
Qaado oo alwaax ah ama caag ah si loo kiciyo.
Maro nadiif ah, shukumaan, ama miirayaasha kafee si loogu daboolo karafeega.
Xarig caag ah si uu ugu biiro miirayaasha weelka biyaha.
Miiraha balaastigga ah si qashinka hadhuudhka looga saaro biyaha.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay ayaa loo baahan yahay
Midhaha Kefir fuuq bax ah.
Nus koob oo sonkor bunni ah.
Diyaargarow, talaabo talaabo ah
Marka hore sonkorta ku rid dhalada galaaska. Ku dar nus koob biyo kulul oo walaaq ilaa inta sonkorta ay gebi ahaanba kala baxeyso. Ka dib ku dar 3 koob oo biyo heerkulka qolka ah, sida ugu fiican inta u dhexeysa 20 iyo 29 digrii.
Ku dar miraha kefir ee fuuq baxay oo dabool dhalo la socota miirayaasha kafeega ama tuwaal. Tallaabadani waa mid muhiim ah maadaama halsano soo saarayso gaasas iyo maro fara badan oo loo baahan yahay si gaasasku si habsami leh uga baxsadaan. Weelka uga tag meel aamin ah oo ha fadhiisato laba maalmood.
Marka la khamiiriyo, kala saar miraha kefir biyo oo ku dar adeeg cusub oo biyo sonkor ah. Cabitaanku wuxuu diyaar u noqon doonaa inuu cuno.
Guryaha kefir biyaha
Cabitaankan biyaha ku saleysan wuxuu leeyahay sifooyin muhiim ah oo naga caawiya inaan caafimaad qabno. Marka xigta waxaan kuu sheegeynaa waa maxay faa'iidooyinka cabitaankani noo keenayo, si aad u go'aansato hal maalin inaad ku sameysid guriga, waxaad ogaan doontaa in jirkaaga uu noqon doono mid aad u caafimaad badan.
Wuxuu hayaa a nidaamka dheef-shiidka caafimaad leh.
Waxay naga dhigeysaa mid wanaagsan.
Waxay ka caawisaa soo celinta dhirta dheefshiidka.
Waxay hodan ku tahay nafaqooyinka sida kubada cagta, fiitamiin B12, magnesium iyo folic acid.
Noo kordhi difaaca.
Wuxuu hayaa a nidaamka difaaca jirka xoog leh oo caafimaad qaba.
Kefir wuxuu la dagaallamaa bakteeriyada xun ee mindhicirka.
Waxay u shaqeysaa sidii bakteeriyada lidka ku ah.
Waxay caawisaa dheefshiidka laktoos. Kordhi dulqaadkeena alaabada caanaha hadaan dulqaad laheyn.
Waxay yareysaa weerarada neefta iyo ficil-celinta xasaasiyadda.
Waxay hagaajisaa astaamaha cilladda mindhicirka oo xanaaq badan.
La dagaallama calool istaag marmar.
Hagaajinta Habka dheefshiidka.
Kordhi caafimaadka lafaha waxyaabaha ay ka kooban tahay kalsiyum.
Waxay yareysaa waxqabadka unugyada kansar.
Waxay ka hortagtaa muuqaalka Kansarka.
ka miro del kefir Waxaa loo isticmaali jiray sanado badan inay caafimaadka jirka iyo jirkaba ilaaliyaan. Waxqabadka probiotics waxay naga caawinayaan inaan dareemno wanaag. Sidaad aragtay, diyaarinta cabitaankani waa mid aad ufudud, waa inaan helnaa miraha kefir oo aan u oggolaanno inay ku madoobaan biyaha.
Waxaad diyaarin kartaa cabitaanka inta jeer ee aad rabto, haddii aad dareento waxoogaa caajis badan iyo dheef-shiid xumo inta lagu jiro xilli, waxaad dooran kartaa inaad sameyso cabitaankan ama aad isticmaasho waxyaabaha ay ka midka yihiin kefir yogurt ama caanaha kefir oo aan sidoo kale ka heli karno dukaamada waaweyn.
Ha ka waaban oo bilaw inaad isticmaasho biyaha kefir ee guriga lagu sameeyo maanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Nafaqeyn » Kefir biyo
Sideeda faaiido ee yaanyada cherry